I-SEO: Ukuba Ngemiphumela Kuyisigamu Sokulwa Nje | Martech Zone
I-SEO: Ukuba semiphumeleni kuyisigamu sempi
NgeSonto, ngoJuni 21, i-2009 NgoMgqibelo, Juni 20, 2009 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi abantu benza konke okulungile ukufaka amasayithi abo kumakhasi wemiphumela yenjini yokusesha kepha abakayiboni imiphumela yosesho. Uma ubheka imiphumela yakho yosesho nokukhula ku-Google Analytics futhi awuboni ithrafikhi eningi - kungadingeka ukuthi umbe ujule kancane.
Ukubandakanya isivakashi esisha kuqala ngekhasi lemiphumela yenjini yokusesha. Ingabe usekhasini lemiphumela yenjini yokusesha yamagama angukhiye azoshayela ithrafikhi? Uma usekhasini lemiphumela yenjini yokusesha, abantu bacofa leyo miphumela kusayithi lakho noma kubhulogi?
Ngeke uthole lolu lwazi ku- analytics package, kepha uzokuthola ku- I-Google Search Console (Abaphathi bewebhu be-Bing ayinakho lokhu okwamanje). I-Google Search Console ikunikeza ukuhlukaniswa kwemiphumela yosesho okhonjwe kuyona nesimo sakho… bese kuba yimiphumela yangempela abantu abachofoza kuyo.
Uma uthola ukuthi usemiphumeleni eminingi yenjini yokusesha kodwa ungachofozwa, kuyinto okufanele uyisebenzele ukulungisa ngokubhala izihloko zamakhasi ezingcono (noma izihloko zeposi le-blog) kanye nemisho embalwa ephoqelelayo, ecebile ngamagama angukhiye. Nayi imiphumela yenjini yokusesha ye- Thola i-Blog yakho:
Qaphela ukuthi umphumela kaProblogger ucindezela kangakanani? Wonke umuntu kumele achofoze ngomphumela wakhe… ngakho-ke nginezinguquko ezithile engizenzayo kwezami. Ngizozama incazelo entsha ye-meta:
Ithuluzi elilula ukwenza i-geotag iwebhusayithi yakho, i-blog, noma i-rss feed. Faka ikheli lakho futhi sizokhiqiza ikhodi yokunamathisela kusayithi lakho, ibhulogi noma okuphakelayo kwe-RSS.
Ngiyethemba, lokhu kuhlela okuncane kuzoholela ekuseshweni okuningi okuningi okuchofoza kusayithi lami ukuze Thola i-Blog yakho ukwedlula umncintiswano!
Ngithole nokuseshwa okuningi kwamathuluzi wokuhlanza ikheli lakho noma ukuthola i-zip yekheli ngakho-ke ngingeze i-verbiage yokwenza lokho futhi! Sizobuka futhi sibone ukuthi yini imiphumela emasontweni ambalwa. Ngithumele kabusha isiza ku-Google ukuze sizikhombe kabusha njengoba sengiguqule ikhasi.
Imfihlo ye-SEM: Imiphumela Ye-Google Inobungozi
Jun 21, 2009 ku-5: 55 PM
Uma uqale ukungcolisa ngeziqu zakho ingabe wesaba ukuthi ungasebenzisa amazinga akho?
Jun 21, 2009 ku-11: 20 PM
Uma kungekho muntu ochofozayo, yini enhle isikhundla esiphakeme?
Jun 21, 2009 ku-11: 27 PM
Angikaze ngiyibone lapho kubekwa khona noma iyiphi iwebhusayithi engiyaziyo noma engiyilandelayo
igama elingukhiye elikhulu futhi akekho ochofoza kusixhumanisi sabo
Jun 21, 2009 ku-11: 32 PM
Kuyamangaza lokho - kufanele ube nabanye ababhali bokuqukethwe abahle. Sinamaklayenti ambalwa esihambile ekuqeqeshweni okuthuthukile kokukhulisa ama-CTR anamagama eposi aphoqelela kakhulu ngoba ama-CTR awo ayephansi kakhulu kuma-SERP. Bengingasho ukuthi kuvamile - kepha ngibonile izibonelo zayo eziningi. Kwanele ukuthumela ngakho :).
Jun 21, 2009 ku-11: 50 PM
Ngiyakwazisa ukuqonda. Nakanjani ngizokubheka lokhu
Ngikholwa ukuthi izinto ezincane ezinjengalezi amawebhusayithi azihlukanisa kanjani ukuba abe
uphumelele online. Ngithola abantu abaningi kakhulu bazi nje ama-ABC ngoba bona
uthathe isigaba futhi angazi ukuthi angancintisana kanjani namanye amawebhusayithi nawo